Dubai dia efa manana Apple Store ary io no fanokafana | Vaovao IPhone
Ny fanokafana fivarotana vaovao ataon'ny orinasa paoma dia matetika fety foana, miaraka amin'ny rehetra Mitehaka tanana ireo mpiasa ary miarahaba ireo mpitsidika vaovao izay tonga voalohany tany an-toerana. Zavatra mitovy amin'ny zava-mitranga amin'ny famoahana vokatra vaovao (indrindra amin'ny iPhone) ary efa lasa iray amin'ireo marika mampiavaka ny fizarana antsinjarany an'ny orinasa izany.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny Apple Store any Dubai dia tsy ho afa-maina amin'izany. Betsaka ny endrika napetraka tamin'ity magazay ity, iray amin'ireo andrasana indrindra tato ho ato, na ny toerana misy azy na ny refy. Ary ny marina dia, araka ny hitantsika andro vitsy lasa izay, ny asa vita amin'ity toerana ity dia mahafinaritra fotsiny.
Tamin'ny 16:00 tolak'andro dia nivoha ireo takelaka lehibe fitaratra izay niasa ho varavarana ho an'ny voalohany tamin'ny filaharana, izay niditra tao amin'ilay magazay tamin'ny alàlan'ny laharan'ny mpiasa niaraka tamin'izy ireo nifandray tànana ary nitondra azy ireo ho any ambadiky ny orinasa . Ao anatin'izany dia misy tontonana lehibe iray izay mampiseho amintsika horonan-tsary samihafa momba ny vokatra Apple, zavatra iray izay toa mampiavaka an'io fomba fanaingoana vaovao io izay ampiharin'ny orinasa amin'ireo magazay lehibe farany misy azy (efa hitantsika tany Bruxelles izany).
Hazo, rindrina rakotra zavamaniry, latabatra mamaly ny fikasihanana ... Fahafinaretana lehibe amin'ny magazay izay isokafan'i Apple iray amin'ireo faritra eto amin'izao tontolo izao izay nahagaga anay indrindra fa tsy nisy ny fanatrehany hatramin'izao: Dubai Tsy azo ihodivirana ny fieritreretana fa, angamba, Gary Allen efa antitra, enga anie ka hiala sasatra izy, dia ho teo amin'ny fisokafany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Store » Ity no fisokafan'ny Apple Store any Dubai [video]
Humber dia hoy izy:
100% dia mitovy hevitra amin'i Simon. Azoko atao mihitsy aza ny mividy Samsung alohan'ny handehanako mamakivaky an'io andalana psychopts manosika tanana io.
Valiny tamin'i Humber